Faahfaahin ka soo baxaysa dooni degtay oo u rarnayd ganacsato reer Puntland. – SBC
Faahfaahin ka soo baxaysa dooni degtay oo u rarnayd ganacsato reer Puntland.
Posted by editor on Agoosto 12, 2011 Comments
Wararka laga helayo ganacsato ku sugan gudaha Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in doonidaasi oo laga lahaa Pakistan ay siday Bagaash iyo dhar loogu talagalay maalinta ciida Soonfur ay ku degtay xeebaha dalka Cuman.
Doonidan aya waxay u rarneyd ganacsato ku sugan deegaanada Puntland, kuwaas oo sheer ku ahaa dhamaan hantidii ay waday doonidaas,
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ay saarnaayeen doonidaasi ku dhowaad 17 Shaqaale ah oo aan ilaa iyo hada la xaqiijin dalalka ay ka soo jeedaan, waxaase wararka qaar ay tibaaxayaan in doonidu ay u qalibmatay cilado ku yimid, inkastoo ay sidoo kale sheegayaan wararka in doonidu ay gubatay intii aysan deign .
Qaar ka mid ah Ganacsatada Magaalada Boosaaso oo ka gaabsaday in magacyadooda la xigto sababo jira Awgood ayaa arinkani ka muujiyay walaac iyagoo sheegay in ay saameyn ku yeelan karto ganacsigii ay ugu talagaleen bulsha weynta reer Puntland gaar ahaan xiliga Ciida, isagoo intaasi raaciyay in ay sara u kac ku imankaraan qiimaha lagu kala iibsado dharka iyo kabaha.
Ugu dambeyntii Ma ahan markii ugu horeysay oo ganacsato reer Puntland ah Gaadiid u raran ay ku degaan badweynta iyo xeebaha Soomaaliya iyadoo la xusuusto todobaadyo ka hor ay dooni ganacsato u raran ay ku degtay Xeebta Magaalada Boosaaso.